Madaxweynaha Qaranka Somaliland Mudane Axmed Maxaned Siilaanyo ayaa xafiiskiisa ku qaabiley wafti ka socday dalka kuwait oo uu hogaaminaayey madaxa hay”adda samofalka kuwait fan oo uu hogaaminaayey Sacad Al Cuyabi oo madax u ah in ka badan afartan dawladood. | Warsugan News
Home Wararka Madaxweynaha Qaranka Somaliland Mudane Axmed Maxaned Siilaanyo ayaa xafiiskiisa ku qaabiley wafti ka socday dalka kuwait oo uu hogaaminaayey madaxa hay”adda samofalka kuwait fan oo uu hogaaminaayey Sacad Al Cuyabi oo madax u ah in ka badan afartan dawladood.
Madaxweynaha Qaranka Somaliland Mudane Axmed Maxaned Siilaanyo ayaa xafiiskiisa ku qaabiley wafti ka socday dalka kuwait oo uu hogaaminaayey madaxa hay”adda samofalka kuwait fan oo uu hogaaminaayey Sacad Al Cuyabi oo madax u ah in ka badan afartan dawladood.
Aug 23, 2015Wararka
waxaana markii shirkaasi laga soo baxay sidaa warbaahinta u sheegtay maareyaha xafiiska samofalka.
mudadii kulankaasi socday waxa lagu lafa guray sidii door wax ku ool ah ay hay”adani samafalka ahi uga qayb qaadan lahayd caawinta iyo dardargalinta shacabka ee Somaliland gaar ahaana dadkii ay abaaruhu ku dhufteen ee galbeedka iyo waqooyiga dalka.
madaxa waftigan kuwait fan sacad al cuyabi oo isna ka hadlay ayaa sheegay in kulanka ay la qaateen madaxwaynaha ay kaga hadleen siddii hay”adani ay u xoojin lahayd kaalmooyinka horumarineed ee ay ugu talogaleen shacabka Somaliland waxaanu iftiimiyey in hay”adani dhistay dugsiyada waxbarashada agoomaha ee ku yaala bariga hargaysa waxa kale oo uu tilmaamay in uu hada socdo dugsigii hablaha ee agoomaha oo isla dugsigaasi inamada ka soo horjeedda.
Gebagebdii waxa uu madaxwaynaha uga mahad ceyey soo dhawaynta diiran ee uu kala kulmay shacbiga iyo Dawladaba.
Previous PostShan iyo Toban xildhibaan oo xukuumada si adag ugu dhaliilay boob ay sheegeen inay hantidii qaranka ku hayso Next PostSIDEEDABA SADDEX NOOC AYAA DUMARKA LALA GUURSADAA !!